Despair | ZAYYA
← Death and Philosophy
My Master, the one I want to be. →
ဒီနေ့ည။ အချိန်က သန်းခေါင်ယံ။ Main Building အပေါ်ထပ်ကနေ အဝေးကို ငေးကြည့်ဖြစ်တယ်။ မြင်ကွင်းကို ရှင်းချင်လို့ ပြတင်းတံခါးဘောင်ရှည်ကို ဆွဲဖွင့်မိတော့ အရင်ဆုံး ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြတာက ပြင်စာမြို့ရဲ့ ဆောင်းတွင်း လေနုအေးတွေ။ မှုန်ဝါးနေတဲ့ တောင်ခြေမည်းမည်းအစွန်ဖျားက စီရရီ မီးရောင်တွေ။ အိပ်မောကျခါနီး နှုတ်ဆက်လွင့်လာတဲ့ Good night ဆိုလား အဲ့ အပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့ ။ ဟိုးအဝေးက ရွှေမန်းမြို့ကြီး ။
တပြန့် တပြော မြင်နေလိုက်ရပေမယ့် အနားသတ်မှာ တောင်ပြာတွေနဲ့ ကွပ်ထားတယ်။ ကျယ်ပြောခြင်းမှာလဲ အဆုံးသတ်ဆိုတာ ရှိတာပဲကိုး။ ဝင်လာမိတဲ့ အတွေး တစ်စက ငါ့စိတ်ကူးတွေကို ချမ်းမြသွားစေတယ်။ နှုတ်ခမ်းဖျားက ကိုယ့်ချစ်သူလေးကို ကပျာကယာ မီး ညှိရင်း လွင့်သွားတဲ့ အတွေးနောက် တကောက်ကောက် လိုက်သွားမိတယ်။
မမှုတ်ထုတ်ရက်တဲ့ အခိုးငွေ့လေးတွေအတွက် ကြိတ်မှိတ်ပြီး မြိုချ။
ပြင်စာရွာရဲ့ လေနုအေးလေးရေ… ငါ့နာမည်လေး ဖျောက်ဖျက်ပေးပါ။ လူတွေ မသိတဲ့ တစ်နေရာ။ လူတွေ မရှိတဲ့ တစ်နေရာ။ ဘယ်သူမှ မလာနိုင်တော့တဲ့ တစ်နေရာ။ ငါက လူမဟုတ်တဲ့ သတ္တဝါမို့ အဲ့လိုနေရာမှာ ကမ္ဗည်းမလို၊ ပြာမှုန်တွေနဲ့ ရောနှောလွင့်ပါသွားဖို့သာ လိုတယ်….။ ထားတော့ ။
သယ်ရင်းရေ။ …. ဒီတစ်မိုးအောက်မှာ လူဆိုတာ – ဘာကိုမှ မပိုင်ဆိုင်တဲ့ သက်ရှိတစ်မျိုးတဲ့ကွ။ ကိုယ်ပိုင်နာမ် နာမည်လေး တစ်လုံး တောင် သူတစ်ပါး မှတ်သား နိုင်ဖို့ အချိန်ပိုင်းလေး သုံးရတာ။
ရှေ့ မီးရောင်ပြပြ ရွှေမန်းမြို့ကြီးက “င-ါ” တစ်ကောင် ဒီမှာ ရပ်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်း ယောင်လို့တောင် စိတ်ကူးမိဖို့ မရှိ။ဒီအချိန် ငါ့ခေါင်းထဲ ရှိတဲ့ အတွေးက ကဲကီးဂတ်ရဲ့ ဂန္တဝင်စာသား “Despair is the sickness unto Death”…. စိတ်ပျက်ခြင်းဆိုတာ သေလုမြောပါး ဝေဒနာ တစ်မျိုးဆိုလား။ နောက်တစ်မျိုး ခေါ်ရင် မျော်လင့်ချက်မရှိတော့ခြင်း သဘော။ ဒါကိုပဲ Despair လို့ ပြောရမယ်။
သူပြောတဲ့စကားတွေ ခေါင်းထဲ ပြန်ထည့်ရင်း စာစီလိုက်တယ်။ လေနုအေးတွေရေ ငါ့အတွေးကို ကူပေးဦး။
“မျော်လင့်ချက်မဲ့တယ်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ် ခန္ဓာမှာ ကိုက်ခဲခြင်း တစ်မျိုးပဲ ။ လူမှာ စိတ်ရှိတယ်။ ခန္ဓာရှိတယ်။ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း ဆန္ဒတွေရှိမယ်။ ဆန္ဒရှိတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ မျော်လင့်ချက် ရှိမယ်။” နို့ပေမယ့် အဲ့မျော်လင့်ချက်ဆိုတာ အစွဲအမြဲ သိမ်းပိုက်ထားမရတာက ခက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ မျော်လင့်ချက်မဲ့ခြင်း ဝေဒနာ Despair ပေါ်လာတော့တာပဲ။ ငယ်ရွယ်သူ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကြီးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် မျှော်လင့်ချက်လေးတွေနဲ့ ကိုယ်။ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ လုံလောက်တဲ့ အဆုံးသတ်ဆိုတာ ရှိမှမရှိဘဲ။ ကြိုးစားရင်းပဲ မျော်လင့် ။ မျော်လင့်ရင်းနဲ့ပဲ သေဆုံးသွားတာ။
အခု ဒီစာမှာတောင် စာဖတ်သူက အဆုံးသတ်ရှိမယ်လို့ မျော်လင့်ထားရင် ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်ဆိုတာ သိထားဖို့တော့လိုမယ်။
ဟုတ်တယ်။ တကယ်တမ်းက စာရေးတယ်ဆိုတာ မျော်လင့်ချက်တွေရဲ့ အတုအယောင်သဘောကို ပုံသွင်းပြတာမျိုး သက်သက်။
Filed under mood Tagged with being, mood, philosophy, psychology